FBS ရှန်ဟိုင်းကို လာပါပြီ!
စက်တင်ဘာ ၂-၃၊ ၂၀၁၈တွင် FBS အဖွဲ့သည် ရှန်ဟိုင်း နိုင်ငံတကာပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်
ရှန်ဟိုင်းပြပွဲ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ၊ FBS အဖွဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကို စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်! ရောင်းဝယ်သူနှင့် ပါတနာအသစ်များအား တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမိသားစုမှာ ပါဝင်လာတာမြင်ရသည့်အတွက် အချိန်ကောင်းရခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှန်ဟိုင်းရုံးကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကူအညီဖြင့် FBS မူဝါဒ၊ အပိုဆုကြေးနှင့် ထူးခြားချက်များအကြောင်း မေးခွန်းများအားလုံးကို ဖြေကြားခဲ့ပြီး၊ FBS CopyTrade ဆော့ဖ်ဝဲကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေါ့၊ အမြဲလိုလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဧည့်သည်များ အမိုက်စားအသုံးဝင်သည့် ဆုများနှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းများကို FBSမှရခဲ့ကြပါတယ်! ကျွန်တော်တို့၏ ရောင်းဝယ်သူနှင့် ပါတနာဟောင်းများကို တွေ့ဆုံပြီး၊ လူသစ်များကို ကြိုဆိုရတာ အလွန်ဝမ်းသာခဲ့ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှန်ဟိုင်း၊ ထပ်ဆုံရအောင်!
ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းများကို ဆန်းစစ်လိုက်ပါ!